အငယ်ဆုံးသားသမီးတွေက ဘဝမှာပိုအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်း(၅)ချက် - Tameelay
အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့အငယ်ဆုံးကလေးတွေဟာ သွက်လက်ဖျတ်လတ်ပြီး တစ်အိမ်သားလုံးရဲ့အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ အိမ်ရဲ့ဆည်းလည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဖိုး၊အဖွားတွေ၊ မိဘတွေ၊ အစ်ကိုတွေအစ်မတွေရဲ့ အချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အငယ်ဆုံးတွေက ဘဝမှာတခြားသူတွေထက် ပိုပြီးအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုတွေကနေ သိရပါတယ်။ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ ….
(၁) အငယ်ဆုံးတွေက ရဲရင့်တယ်
အငယ်ဆုံးတွေက စွန့်စားရတာကြိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး တခြားမွေးချင်းတွေထက်ပိုရဲရင့်ပါတယ်။ သူတို့တွေတစ်ခုခုလုပ်ချင်ပြီဆိုရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုပြီး စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့တာတွေမရှိ၊ တွန့်ဆုတ်မှုမရှိဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုပ်ရဲတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရဲရင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်က သူတို့ကိုတခြားသူတွေထက်ပိုအောင်မြင်စေပါတယ်။
(၂) အကောင်းမြင်စိတ်ရှိပြီး ဟာသဉာဏ်ပိုကောင်းတယ်
အငယ်ဆုံးလေးတွေဟာ စွန့်စားတတ်ပြီးရဲရင့်သလို အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ဟာသဉာဏ်လည်းပိုရှိတဲ့သူတွေပါ။ အရာရာကိုအကောင်းဘက်က လှည့်တွေးတတ်တာကြောင့် စိတ်ညစ်တာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေဖြစ်ခဲပြီး အမြဲလိုလိုလန်းဆန်းတက်ကြွနေတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့တွေလုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေအပေါ်မှာ အာရုံစူးစိုက်မှုပိုကောင်းပါတယ်။
စိတ်လှုပ်ရှားစရာတစ်ခုခုဖြစ်လာတဲ့အခါ စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့ အချိန်အများကြီးယူစရာမလိုဘဲ ခဏအတွင်းစိတ်တည်ငြိမ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကလည်း သူတို့ကို အလုပ်မှာသူများထက်ပိုသာစေပါတယ်။
အငယ်ဆုံးတွေက သူငယ်ချင်းဖွဲ့တဲ့နေရာမှာ တော်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုလူကိုဘယ်လိုပေါင်းရမလဲဆိုတာ နားလည်ကြတာမို့ ဒီအချက်ကလည်း သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။
သူတို့တွေဟာ တခြားသူတွေထက်ပိုပြီးတော့ စူးစမ်းလိုစိတ်ပိုများတယ်၊ စပ်စုကြပါတယ်။ ဒီအချက်ကပဲ သူတို့ကို သူများထက်ပိုမြင်တတ်တဲ့သူလေးတွေဖြစ်စေပြီး ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတိုးတက်စေပါတယ်။ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကောင်းတဲ့သူတွေက ဘဝမှာပိုအောင်မြင်ကြတာကြောင့် အငယ်ဆုံးသားသမီးတွေက တခြားသူတွေထက် အောင်မြင်နိုင်ချေပိုများတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရတဲ့အချက်ပါပဲ။
အိမျတဈအိမျရဲ့အငယျဆုံးကလေးတှဟော သှကျလကျဖတျြလတျပွီး တဈအိမျသားလုံးရဲ့အခဈြတှကေို သိမျးပိုကျထားတဲ့ အိမျရဲ့ဆညျးလညျးလေးတှဖွေဈပါတယျ။ အဖိုး၊အဖှားတှေ၊ မိဘတှေ၊ အဈကိုတှအေဈမတှရေဲ့ အခဈြဆုံးဖွဈတဲ့ အငယျဆုံးတှကေ ဘဝမှာတခွားသူတှထေကျ ပိုပွီးအောငျမွငျနိုငျတယျလို့ လလေ့ာမှုတှကေနေ သိရပါတယျ။ အကွောငျးရငျးတှကေတော့ ….
(၁) အငယျဆုံးတှကေ ရဲရငျ့တယျ
အငယျဆုံးတှကေ စှနျ့စားရတာကွိုကျတဲ့သူတှဖွေဈပွီး တခွားမှေးခငျြးတှထေကျပိုရဲရငျ့ပါတယျ။ သူတို့တှတေဈခုခုလုပျခငျြပွီဆိုရငျ ဘာဖွဈသှားမလဲဆိုပွီး စိုးရိမျကွောကျရှံ့တာတှမေရှိ၊ တှနျ့ဆုတျမှုမရှိဘဲ ဆုံးဖွတျခကျြခပြွီးလုပျရဲတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီလို ရဲရငျ့တဲ့စိတျဓာတျက သူတို့ကိုတခွားသူတှထေကျပိုအောငျမွငျစပေါတယျ။
(၂) အကောငျးမွငျစိတျရှိပွီး ဟာသဉာဏျပိုကောငျးတယျ
အငယျဆုံးလေးတှဟော စှနျ့စားတတျပွီးရဲရငျ့သလို အကောငျးမွငျစိတျနဲ့ဟာသဉာဏျလညျးပိုရှိတဲ့သူတှပေါ။ အရာရာကိုအကောငျးဘကျက လှညျ့တှေးတတျတာကွောငျ့ စိတျညဈတာ၊ စိတျဓာတျကတြာတှဖွေဈခဲပွီး အမွဲလိုလိုလနျးဆနျးတကျကွှနတေတျပါတယျ။ ဒီတော့ သူတို့တှလေုပျရမယျ့တာဝနျတှအေပျေါမှာ အာရုံစူးစိုကျမှုပိုကောငျးပါတယျ။
စိတျလှုပျရှားစရာတဈခုခုဖွဈလာတဲ့အခါ စိတျတညျငွိမျဖို့ အခြိနျအမြားကွီးယူစရာမလိုဘဲ ခဏအတှငျးစိတျတညျငွိမျနိုငျပါတယျ။ ဒီအခကျြကလညျး သူတို့ကို အလုပျမှာသူမြားထကျပိုသာစပေါတယျ။
အငယျဆုံးတှကေ သူငယျခငျြးဖှဲ့တဲ့နရောမှာ တျောကွပါတယျ။ ဘယျလိုလူကိုဘယျလိုပေါငျးရမလဲဆိုတာ နားလညျကွတာမို့ ဒီအခကျြကလညျး သူတို့ရဲ့အောငျမွငျမှုအတှကျ အထောကျအပံ့ဖွဈစပေါတယျ။
သူတို့တှဟော တခွားသူတှထေကျပိုပွီးတော့ စူးစမျးလိုစိတျပိုမြားတယျ၊ စပျစုကွပါတယျ။ ဒီအခကျြကပဲ သူတို့ကို သူမြားထကျပိုမွငျတတျတဲ့သူလေးတှဖွေဈစပွေီး ဖနျတီးနိုငျစှမျးတိုးတကျစပေါတယျ။ ဖနျတီးနိုငျစှမျးကောငျးတဲ့သူတှကေ ဘဝမှာပိုအောငျမွငျကွတာကွောငျ့ အငယျဆုံးသားသမီးတှကေ တခွားသူတှထေကျ အောငျမွငျနိုငျခပြေိုမြားတယျဆိုတာ ငွငျးလို့မရတဲ့အခကျြပါပဲ။
Categories General Knowledge, Tameelay Knowledge Tags 17, pp Post navigation